Teôlôjia - Wikipedia
Ny teôlôjia dia taranja na vondron-taranja atao hianarana sy hahalalana ny amin' Andramanitra, na ny amin' ny hoe "andriamanitra", amin' ny alalan' ny fandraisan' anjaran' ny fisainan' olombelona ho enti-manazava sy handaminana bebe kokoa izay zavatra fantatra tamin' ny alalan' ny fanambaràna ka miantefa amin' ny finoana.
Na dia tao amin' ny fivavahana kristiana aza no tena nahafantarana ny fanaovana teôlôjia dia maro koa ireo fivavahana manao teôlôjia ka isan' izany ny fivavahana silamo sy ny jodaisma. Tsy ny tontolon' ny fivavahana ihany no ahitana teôlôjia fa ahitana azy koa ny taranja filôzôfia toy ny sampan-taranja metafizika (dia ilay atao hoe ôntô-teôlôjia). Tsy ny fivavahana rehetra koa tsy akory no manaiky ny fanaovana teôlôjia fa misy ireo izay mitsipaka an' izany ka mihevitra fa tsy mety hifangaro amin' ny zavatra momba ny finoana na hanampy zavatra hafa tsy araka ny fanambaràna tokony hiantefa amin' ny finoana ny teôlôjia.
Amin' izao fotoana izao dia maro ny sekoly sy oniversite ianarana teôlôjia nefa ny sasany dia tsy miankina amin' antokom-pivavahana ka ny mpianatra sy ny mpampianatra ao dia tsy voatery ho olona mino.
Fomba fiasa voasaina no entina manao ny fanakarana ny momba an' Andriamanitra sy ny manodidina azy ao amin'ny teôlôjia hany ka nisy fotoana tsy niaingan' ny mpanao teôlôjia tamin' ny Soratra Masina, izay vokatry ny fanambaràna, hanakarana ny tontolon' Andriamanitra fa tamin' ny fisainany irery ihany.
2 Ny theologia teo amin' ireo filôzôfa grika
3 Ny teôlôjian' ireo finoana abrahamika
3.1 Teôlojia isaky ny fivavahana tsirairay
3.1.1 Ao amin' ny jodaisma
3.1.2 Teôlôjia kristiana
3.1.3 Ny teôlôjia miozolmana
4 Sampan' ny teôlôjian' ny fivavahana abrahamika
4.1 Taranja hita ao amin' ny fivavahana abrahamika lehibe
4.2 Taranja an' ny Kristianisma manokana
4.2.3 Antrôpôlôjia kristiana
Ny teny hoe teôlôjia dia avy amin' ny teny grika hoe θεολογία / theologia, izay azo amin' ny fanakambanana ny teny hoe Θεός / theos (midika hoe "andriamanitra") sy ny hoe -λογία / logia (midika hoe "fitenenana" na "firesahana") nisampana avy amin' ny teny hoe λόγος / logos ("teny"). Ny mpampianatra na izay nianatra teôlôjia no atao hoe teôlôjiana.
Ny theologia teo amin' ireo filôzôfa grikaHanova
Ny teny grika hoe θεολογία / theologia dia nampiasain' ilay filôzôfa grika atao hoe Platô amin' ny dikany ara-bakiteny hoe "resaka momba ny andriamanitra" na "resaka momba an' Andriamanitra" tamin' ny taonjato faha-4 tal. J.K. tao amin' ny asa soratra nataony, ao amin' ny Boky faha-2 toko faha-18, mitondra ny lohateny hoe Πολιτεία / Politeía ("fitondram-pirenena"). Ao amin' io toko io i Platôna dia nizara ny filôzôfia ho zana-taranja telo izay nomeny ny anarana hoe μαθηματικὴ / mathêmatikê sy φυσική / phusikê ary θεολογική / theologike, ka ity farany ity no mitovitovy amin' ny metafizika izay iresahana momba ny fomban' Andriamanitra na ny andriamanitra.
Raha nanoratra araka ny loharano avy amin' ireo filôzôfa stôika i Marcus Terentius Varro (mpanoratra latina), dia nanavaka karazana lahateny telo, dia ny lahateny momba ny fedràn' ireo andriamanitry ny Grika, ny lahateny voasaina ara-pilôzôfia andinihana ireo andriamanitra sy ny amin' izao rehetra izao, ary lahateny momba ny fanaon' ny olombelona eo amin' ny fiarahamonina toy ny fombafomba sy ny adidy ary ny fitandremana ny zavatra andidian' ny fivavahana.
Ny teôlôjian' ireo finoana abrahamikaHanova
Teôlojia isaky ny fivavahana tsirairayHanova
Ao amin' ny jodaismaHanova
Ny tsy nisian' ny fahefana pôlitika misaraka amin' ny fivavahana dia nahatonga ny fandinihana teôlôjika tsy ho hita afa-tsy tao amin' ny tontolo sy ny fiarahamonina ary ny sinagôga, fa tsy nisy toeram-pampianarana manokana, ka isan' izany ireo ady hevitra ifanaovan' ireo raby momba ny lalàna jiosy sy ny fanaovana heviteny amin' ny Torah. Zava-dehibe amin' ny teôlôjia kristiana sy silamo ary jiosy amin' izao ny teôlôjian' ny jiosy fahizay.
Ny teôlôjian' ny jodaisma dia apôfatika: tsy miseho manontolo fa amin' ny ampahany Andriamanitra tamin' ny fotoan' ilay roimemy mirehitra (Eksôdôsy 3.13-14) raha nanonona ny anarany izay tsy hay tononina ao amin' ilay fehezanteny hoe: אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehieh Asher Ehieh. Sady tokana izy no tsy azo fantarina (Isaia 40.25). Ny tsy fisian' ny zavatra azo ampitahaina aminy sy ny fampitahana azy amin-javatra hafa dia norainsin' i Maimônida izay nanoratra hoe: "Tsy vatana Andriamanitra ary tsy manam-pifanahafana na amin' inona na amin' inona, eo aminy sy ny zavatra noforoniny", ary "ny fisiany tsy tahaka ny azy ireo", ka noho izany dia "tsy samy atao hoe "fisiana" ny fisiany sy ny fisian' izay zavatra ivelany afa-tsy noho ny fitovian' endri-teny".
Ny lohahevitry ny fihoa-drahan' Andriamanitra, izay fototr' izany teôlôjia apôfatika izany, dia iankinan' ny filôzôfia jiosy manontolo, hatramin-dry Moïse Mendelssohn sy Hermann Cohen na ry Léo Strauss sns.
Tsy azo fantarina afa-tsy amin' ny alalan' ny fandinihana ny Torah sy ny heviteny momba izany Andriamanitra, ary amin' ny alalan' ny fanajana ireo didy (מִצְווֹת‬ / mitsvot). Ny tsy Jiosy na Jentilisa (גוים‎ na גויים / Goyim), dia afaka mamantatra koa an' Andriamanitra raha manaja ireo lalàna fiton' i Noa.
Ny teôlôjia kristiana dia andinihana ny Andriamanitry ny Kristiana sy ny fifandraisany amin' ny olombelona eo amin' ny tantaran' ny famonjena, ka ny fara tampony dia ny asa sy ny sorom-panavotana nataon' i Jesoa Kristy amin' ny maha Tenin' Andriamanitra azy (grika: Logos Theou). Ara-tantara sy araka ireo teôlôjiana tranainy dia taranja mifanahantsahana amin' ny siansa ny teôlôjia satria natao handalinana ny finoana sy hamaliana ireo fanontaniana ara-pilôzôfia.
Mifantoka amin' ny zava-boalazan' ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao ny teôlôjia kristiana nefa koa afaka manampy izany ny lovam-pampianarana, indrindra ao amin' ny teôlôjia katôlika. Mampiasa ny fanaovana hevi-tenin' ny Baiboly sy fitsikerana voasaina ary fanjohian-kevitra hentitra ny teôlôjiana kristiana. Isan' ny tanjoana koa ny hiarovana ny finoana kristiana manoloana ireo fanoherana sy tsikera manaratsy, mba hanamora ny fanarenana eo amin' ny Fiangonana, mba hanampiana ny fampielezana ny fivavahana kristiana, mba hitrandrahana ireo lovam-pampianarana kristiana.
Ny tenim-pinoana (na dôgma) sy ny foto-pampianarana ataon' ny firehana sasany dia niteraka tsy fifanarahan-kevitra teo amin' ny samy teôlôjiana ka nampisy ireo atao hoe mpanao fampianaran-diso (na heretika). Mba hanoherana sy handresena lahatra ireo filôzôfa tamin' izay dia nampiasa ny fitenin' ireo filôzôfa ireo ny teôlôjiana. Nisy noho izany ny fifangaroan' ny teôlôjia sy ny filôzôfia (jereo, ohatra, ny voambolana ampiasaina momba ny Trinite).
Ny teôlôjia miozolmanaHanova
Ny teôlôjia miozolmana dia misahana ny fandalinana ny finoana silamo araka ireo soratra ao amin' ny Kor'any sy ny Hadita ary ny tantaram-piainan' ny mpaminany Mohamady. Atao hoe Kalâm ny taranja ikarohana ireo fototra teôlôjika amin' ny alalan' ny fomba fiasa misy fampiadian-kevitra sy fanohanan-kevitra voasaina. Amin' ny teny arabo dia midika hoe "resaka" na "fitenenana" ny hoe Kalâm. Ao amin' ny teôlôjia silamo koa dia mitana ny anjara toerany ny eskatôlôjia izay miresaka momba ny fiafaran' ny olombelona sy izao rehetra izao ary ny tontolo vaovao handimby azy, ny fitsaran' Andriamanitra farany ny asan' ny olombelona aorian' ny fitsanganana amin' ny maty.
Amin' ireo Sonita dia enina ny fototry ny finoana, dia ny finoana an' i Allah, ny anjely, ny Soratra nambaran' Andriamanitra, dia ny Kor'any, ny mpaminany, ny andro farany, ny fanendrena mialoha (predestinasiona).
Ho an' ireo Shiita dia dimy fotsiny izany, dia ny maha tokana an' Andriamantra, ny fahamarinana, ny faminaniana, ny asan' ny imam ary ny momba ny andro farany (eskatôlôjia).
Ny Motazilita kosa dia manantitrantitra momba ny fifandraisan' ny olombelona amin' Andriamanitra fa manana sitrapo malalaka ambonin' ny fanendren' Andriamanitra mialoha ny olombelona, ary ny fahamarinan' Andriamanitra dia ambony noho ny maha tsy toha azy. Mino koa ny Motazilita fa afaka anakarana ny zavatra tian' ny Kor'any holazaina marina ny fampiasana ny lôjika. Izany no fototr' ilay atao hoe اِجْتِ / Ijtihâd ("ezaka fandinihana").
Sampan' ny teôlôjian' ny fivavahana abrahamikaHanova
Taranja hita ao amin' ny fivavahana abrahamika lehibeHanova
Ny eskatôlôjia dia lahateny na fandinihana momba ny fiafaran' izao tontolo izao izay atao hoe koa andro farany. Maro ireo fivavahana miresaka ny amin' ny andro farany ka samy manana ny eskatôlôjiany izy ireo ka ny fantatra indrindra amin' izany dia ny an' ny kristianisma sy ny jodaisma ary ny finoana silamo. Mahakasika ireo lohahevitra mifandray amin' ny andro farany toy ny amin' ny Mesia na ny vanim-potoana mesianika sy ny zavatra hiseho aorian' ny fahafatesana ary ny amin' ny fanahin'olombelona koa ny eskatôlôjia.
Ny ankamaroan'ireo fivavahana mônôteista dia misy foto-pampianarana milaza fa ny mpivavaka voafidy na mendrika ny finoana marina dia hovonjena na hafahana amin' ny fitsaran' Andriamanitra sy ny fahatezerany amin' ny ho avy. Ho any am-paradisa izy ireo aloha na mandritra na aorian' io fitsarana io arakaraka ny fampianarana.
Ny eskatôlôjian' izao rehetra izao (eskatôlôjia kôsmika) dia iresahana ny andro farany, sy koa indraindray ny fitsarana farany ary ny fitsanganana amin' ny maty. Ny eskatôlôjia isam-batan' olona kosa dia iresahana ny fiainana aorian' ny fahafatesana, ny hiafaran' ny fanahin' olombelona aorian' ny fahafatesan' ny vatana (izay hiseho amin' ny endrika maro samihafa.
Ny sôteriôlôjia no andalinana ny amin' ny famonjena.
Ny anjelôlôjia dia fandalinana ny amin' ny anjely. Hadihadina amin' izany ny anaran' izy ireo, ny toeran' ny anjely tsirairay ao amin' ny ambaratonga any an-danitra sy ny anjara asany. Miovaova arakaraka ny antokom-pivavahana dinihina izay samy manana ny anjelôlôjiany izany. Ny zôrôastrisma koa dia manana ny anjelôlôjiany.
Ny demônôlôjia dia fandalinana sy fampianarana momba ny demony na devoly. Hatramin' ny fiafaran' ny taonjato faha-13 dia tsy dia nisy mpiraharaha firy ny resaka demony. Ny teôlôjiana dia nanomboka nifantoka tamin' ny fandalinana ny Ratsy.
Taranja an' ny Kristianisma manokanaHanova
Ny kristôlôjia dia ianarana sy andinihana ny amin' ny persôna sy ny fampianarana ary ny asan' i Jesoa amin' ny maha Kristy azy, indrindra ny amin' ny natioran' i Jesoa sy ny fifandraisany amin' Andriamanitra: i Jesoa ve zanak' Andriamanitra, zanaka natsangany, olombelona tsy misy fangarony, sa Andriamanitra tsy misy fangarony? Izany fandinihana ao amin' io taranja io izany dia miainga avy amin' ny anaram-boninahitra omena an' i Jesoa ao amin' ny Testamenta Vaovao, toy ny hoe Kristy, Tompo, Zanak' Andriamanitra, Mesia, sady mandinika koa ny amin' ny maha-izy-azy an' i Kristy sy ny hevitry ny anaram-boninahitra hoe Kristy.
Ny pneomatôlôjia iresahana sy ianarana ary ampianarana ny amin' ny Fanahy Masina. Iresahana ny amin' ny persônan' ny Fanahy Masina ao amin' ny Trinite sy ny asan' ny Fanahy Masina ny pneomatôlôjia. Taty aoriana dia tafiditra ao amin' io taranja io koa ny hoe fahateraham-baovao, ny fanomezan' ny Fanahy (karismata), ny batisan' ny Fanahy, ny fanamasinana, ny tsindrimandrin' ny mpaminany, ary ny filatsahan' ny Fanahy Masina.
Ny antrôpôlôjia no andalinana ny amin' ny olombelona manontolo araka ny fanambaràn' Andriamanitra ao amin' ny Baiboly sy amin' ny fijerena ny fifandraisany amin' Andriamanitra. Halalinina ao ny amin' ny toetra sy ny olombelona: ny vatan-tenany sy ny ainy ary ny fanahiny izay mitambatra ka mamorona ny atao hoe olona, araka ny anoritsoritan' ny Baiboly azy. Isan' ny resahina amin' izany ny amin' ny fahariana ny olombelona, ny fisainany, ny fahotany ary ny fahafatesany.
Ny ekleziôlôjia no andalinana ny anjara asan' ny Fiangonana amin' ny maha vahoakan' Andriamanitra azy eo amin' ny tantaran' ny famonjena ny olombelona. Ny ekleziolojia dia andalinana koa ny fiandohan'ny kristianisma, ny fifandraisany amin' i Jesoa, ny anjara asa sahaniny eo amin' ny asam-pamonjena, ny fandaminana misy ao aminy, ny fitsipika mifehy azy, ny zava-kendreny sy ny tanjony ary ny fitantanana azy. Mandalina koa ny fiantraika sy ny fivoaran' ireo fiangonana izay nanjary ho Fiangonana amin' ny maha andrin' ny finoana azy koa ny ekleziôlôjia. Mifandray akaiky amin' ny teôlôjia pastôraly io sampan' ny teôlôjia kristiana io.
Ny mariôlôjia dia taranja teôlôjika an' ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa andalinana ny amin' i Maria amin' ny maha renin' ny mpamonjy azy ary indrindra ny maha renin' Andriamanitra azy.
↑ 1,0 et 1,1 Voasaina: fr: "rationnel"
↑ Liddell and Scott's Greek-English Lexicon
↑ Io boky io no nadika amin'ny teny latina hoe Res Publica ("zava-bahoaka") sady fantatra koa amin'ny teny frantsy hoe La République na amin'ny teny anglisy hoe The Republic.
↑ Aristotle, Metaphysics, Book Epsilon. (Tahiry).
↑ Araka ny tsiahy ataon'i Aogostino ao amin'ny sorany mitondra ny lohateny hoe Tanàn'Andriamanitra, Boky hafa-6, toko faha-5.
↑ Randi Rashkover, 'A Call for Jewish Theology', Crosscurrents, Winter 1999,
↑ Maïmonide, Le Guide des égarés Livre I, chap. XXXV.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teôlôjia&oldid=1040725"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 09:47
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 09:47 ity pejy ity.